जनतालाई पिडा दिईरहने अहिलेका नेताहरुलाई जरैसहित फालौं, देश जोगाऔं ! – Halkhabar kura
९ बैशाख २०७७, मंगलवार १८:२०
जनतालाई पिडा दिईरहने अहिलेका नेताहरुलाई जरैसहित फालौं, देश जोगाऔं !
श्री आदर्णीय नेताज्यु।।।
हिजो तपाईं हामी एकै ठाउमा बस्थ्यौ खाना संगै खान्थ्यौ। पहाडमा गरीब बस्तिमा बास बस्दा भुटेको मकै सम्म लाई सजिलै मिल्न कहाँ सक्थ्यो र? आफुले खानाको लागि दिन रात मजदुरी गर्ने ति गरीब इमान्दार जनताले तपाईं हामी लाई गास काटेर आफु चिसो भुइमा सुतेर आफ्नो इज्जत तपाईंको खुट्टामा राखेका होइनन र?
नेपाली कङ्रेस पुर्व माले एकताकेन्द्र मसाल हुँदै माओवादी सबैले ति गरीब निमुखाको बालबच्चाको लागि राखेको खाना खाएका होइन भनेर आफ्नो छातीमा हात राख्ने हिम्मत तपाईं हरु सँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर्बहारा बर्गिय दृष्‍टिकोण जनवदी गीत संगित जातिय बिभेदको अन्त्य बर्गिय मुक्तिको भाषण गर्दै ति सोझा गाउले जनताको साथ सहयोग नपाएको भये तपाईंहरु आज कुन देशको मजदुरी गर्दै हुनु हुन्थ्यो होला या उतै मर्नु हुन्थ्यो होला ?
इमान जमान नैतीकता जिम्मेवारी कर्तब्य केही बाँकी राख्नु भएको छ कि आफु भित्र? कि दुनियाँको चकाचौध महल भित्र सुरासुन्दरी कमिसन पैसा सबै तपाईंहरुको लागि सर्बोपरी भयो? कती निर्दोश नेपालीको लास माथि तपाईंहरुको यहाँ सम्मको यात्रा पार गर्नु भएको छ याद छ कि सबै बिदेशिको महँगो रक्सी हरिया राता नोट अलिशान गाडी महलमा भुल्नु भयो?
आज ति मजदुर तपाईं जनता बाट चुनिएका जनताद्वारा जनताको लागि भनिएको ब्यबस्था पर्ती सहयोगि दृष्‍टिकोण चाहेका छन। उनिहरु तपाईं बाट ब्यक्तिगत स्वार्थ केही ठुलो अपेक्षा गरेका छैनन। उनिहरु आफ्नो देशमा काम गरेर खाने बातावरण परिवारसँग जीवन बिताउन शिक्षा स्वास्थ्य गास बास कपासको आशा राख्नु उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार हो।
त्यो उनिहरु सित्तैमा मागेका पनि छैनन। मेहेनत गरेर पसिना झारेर देश सिंगार्ने सपना देख्नु कुनै अपराध होइन, उनिहरु राज्यलाई कर तिर्छन। लाखौं कर्मचारी नेता कार्यकर्ता मंत्री राष्ट्रपती सम्म बिशिस्ट श्रेणिमा बाच्ने हैसियत उनै मजदुर किसान ब्यापारीले तिरेको कर बाट सम्भव भएकोछ। तपाईंहरुले खाने हग्ने मुत्ने सुत्ने लगाउने ओढ्ने ओछ्याउने पिउने सबै तिनै गरीब मजदुर बर्ग बाट उठाएको कर बाट आएको पैसाले हो।
तपाईंहरु बाटोमा हिड्दा साइरन बजाउदै VVIP( Very Very Impotent Persons) बनेर दुनियाँको सामु प्रस्तुत हुने हैसियत कहाँ बाट पाउनु भएको हो?
हाम्रो देशको प्रतीब्यक्ती आम्दानी भन्दा सयौ गुणा महंगा बिदेशी गाडी चढ्ने बिरामी पर्दा तुरुन्तै बिदेश उपचार गर्न जाने तपाईंको श्रीमती छोरा छोरी नाती नातिनी भाई भतिजा आमा बुवा आफन्त लाई कुनै पैसा बाट बैदेशिक सैर गराउनु हुन्छ? तपाईंहरु नै हो नी हिजो शाहीसत्ताको यही रबैयाको बिरोध गरेर नथाक्ने?
२००७साल पछी यो देश सँग प्रजातान्त्रिक ब्यबस्थामा कदम राखेका अरु देश र हामी बिचमा यत्ती सारो फरक अवस्था किन कसरी भयो? जब कि २००७सालतिर उनिहरु भन्दा हाम्रो अवस्था परनिर्भर्ता नबराबर थियो। हामी लाई चाहिने खाध्यानन हामी आँफै उत्पादन गर्थ्यौ। भलाई हामीले गिट्ठा भ्याकुर नै खान्थ्यौ तर आज जस्तो भोकै मर्ने अवस्था त थिएन।
हामी लाई नुन मट्टितेल भन्दा अरु चिजमा आफ्नो देशको धनराशी बिदेश पठाउनु पर्ने अवस्था थिएन। हामी जडिबुटिको प्रयोग बाट ठुला ठुला रोगको उपचार गर्थ्यौ। आज हाम्रा आफ्नै भाई छोरा बैदेशिक मजदुरिको नाममा पराइ भुमिमा मृत्‍यु हुँदा तपाईं हरु लाई अलिकती पिडा बोध हुँदैन? तिनै मजदुर हरुले बिदेश बाट पठाएको पैसामा तपाईंअहरुको बिलासिताको जीवन चलेकोछ।
आज दुनियाँ भरिका गरीब धनी देशहरु आफ्ना नागरिक हरुको उद्दारमा खटिएका छन। हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भुटानले सम्म आफ्ना नागरिकलाई लैजान जहाज नै चार्टर गर्न सक्छ भने हाम्रो छिमेकी देश भारतमा काम गर्ने मजदुर जो हाम्रो सीमानामा रुदै पलपल छट्पटाउदैछन उनिहरुको उद्दार गरेर सुरक्षित नेपाल भित्रै राख्न के ले रोकेको छ? गरीबको पिडा किसानको पिडा तपाईंहरुले नसुन्ने नबुझ्ने हो भने तपाईंहरु किन कुर्चिमा बुर्कुसी मारेर बस्नु पर्‍यो?
अरब देशमा मृत्‍यु सँग जुधी रहेका लाखौं मजदुर लाई देश भित्र ल्याउनु पर्ने तपाईंहरुको जिम्मेवारी होइन र? नत्र सत्ता सधैं एकनास हुने अवस्था हुँदैन त्यो कुरा ईतिहासले हामी लाई सिकाउदै आएको छ। २४० बर्शे राजातन्त्र त जान सक्दो रहेछ भने यदी ति मजदुरको आशालाई निराशामा परीणत गरियो भने तपाईं हरुको हैसियत पनि राणाराजा हरुको जस्तो नहोला भन्ने को होला? यस्तो बिपदको घडीमा पनि तपाईंको सरकारका मंत्री सचिब कर्मचारी सहयोगि सबैले भ्रस्टाचार गर्न प्रतिश्प्राधा चल्नु तपाईंहरुको लागि प्रतिकुल अवस्था आउने बातावरण नबनाउन हादिक अपिल गर्दै हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली नागरिक लाई रोग भोक सोक बाट बाहिर निकाल्नु हुने छ भन्ने आशा राख्दछु।
Previous अब भोकमरीबाट बच्न कृषि क्रान्ति सुरु गरौँ – कोरोनाले दिएको ठुलो सन्देश “आत्मनिर्भरता”
Next नेताहरु धनी र जनता गरिब हुने यस्तो गणतन्त्र चाहिएको थिएन, राजाको ठाउँमा रजौटाहरु चाहिएको थिएन